Fanesorana ny ady amin'ny azota azony
Mampidi- doza ny fampitandremana. Manimba ny endriny izy ireo ary manelingelina ny fiainana ara-dalàna. Ny fanesorana ny aviavy amin'ny azota azonao dia ahafahanao manala tanteraka ireny trangan-javatra ireny ao anatin'ny minitra vitsy monja. Ity dia fialan-tsasatra, izay ahafahan'ny tazam-pandehan'ny hafanana ambany. Ilay jiolahy dia rava sy maty.
Rahoviana no azo esorina amin'ny azota ny fampitandremana?
Ilaina sy ilaina ny manaisotra ny mofomamy misy azôty matevina eo amin'ny tongotra, ny sandry, ny tarehy ary ny faritra hafa ao amin'ny vatana raha ilaina dia marefo sy manamaizina. Ity fomba fiasa ity dia aseho amin'ny tranga koa rehefa:
Ny fanaintainana mahery vaika dia voamarika amin'ny toeran'ny neoplasma;
Manomboka manova loko na endrika ny labozia;
ny lokon'ny fanabeazana dia tsy miavaka;
Mihamitombo ny isan'ireo amboadia.
Fanafody fanesorana ny ady amin'ny nitroka
Ny fomba fanesorana ny aviavy amin'ny azota afovoan-dranomasina dia manjavozavo. Tokony horaisina amin'ny:
ny tsy fahatokisan-tena ho an'ny Stick;
ny fisian'ny epileptika tsikelikely;
Ny aretina hoditra na fako eo amin'ny toerana iray izay hokarakaraina amin'ny nitroka;
aretina catarrhal ary dingana fanalefahana;
Amin'ny lafiny iray, tsy azo atao ny manala aviavy mitoka-monina na marary amin'ny fisotroan-dronono (diabeta, hepatita, VIH), satria misy fiantraikany eo amin'ny fiterahany izany . Noho izany dia mety hiteraka aretina mahery vaika na fanasitranana mahery vaika eo amin'ny toeram-pitsaboana.
Ahoana no fomba anaovanao ny dingana fanesorana?
Alohan'ny hanatanterahana ny fomba fitsaboana alika amin'ny ranon-tsavoka, dia ilaina ny mandalo andrana fitsapana. Izany dia hanampy amin'ny fisorohana ny fisehoan-javatra mampihetsi-po. Ny fanesorana ny fivontosana dia haka fitaovana manokana - milina iray ho an'ny mangatsiaka mangatsiaka sy mpangataka. Ny faritra voatsabo dia nodiovina amin'ny vahaolana izay miaro ny hoditry ny mikraoba. Aorian'izany, fitaovana iray dia ampiharina amin'ny sisin-dalam-be, izay manalefaka ny ampahany ambony amin'ny fanabeazana. Izany dia manampy amin'ny fanamafisana ny azota.
Mba hanatanterahana ny dingana, dia anaovan'ny anesthésie ary misy mpangataka (rantsan-kazo kely) iray dia apetraka eo amin'ilay tranokala miandry. Any am-piandohana dia fitahiran-drano misy azota afovoan-drano ary aorian'ny fahaketrahana kely, manomboka mitsimoka ny ranom-boaniho, izay manala ny neoplasme. Mandritra ny fijerena, lasa fotsy ny fotsy hoditra. Avy eo dia ampiharina amin'ny tranokala fitsaboana, izay manafoana tanteraka ny fahatsapana hafahafa.
Amin'ny herinandro manaraka dia manova ny lokony sy ny endriky ny blister izay miseho rehefa nesorina ny labozia tamin'ny nitroka azony. Ara-dalàna izany. Ny lokon'ny loko maitso marevaka dia manondro fa ny nitroka dia nipoitra tao amin'ny faritra lalin'ny epidermis ary naratra ny fantson-dra. Ny fanasitranana ny hoditra aorian'izany dia afaka maharitra roa herinandro.
Aorian'ny 10 andro dia lasa mena ny tranokala ary levona ny banga. Mety ho mavomavo mena kely ny hoditra eo amin'ny hoditra. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanjavona tanteraka izy.
Ny fiantraikan'ny fanesorana azy amin'ny nitroka
Amin'ny ankapobeny, ny fomba fanesorana ny labozia amin'ny stick azota dia tsy miteraka fahasarotana goavana sy voka-dratsiny. Matetika ny marary rehetra amin'ny fitsaboana ireo faritra lehibe amin'ny hoditra dia mety hikapoka mafy. Saingy, raha manadio ny hoditra amin'ny alikaola sy ny voankazo maina, dia esorina tanteraka izany mandritra ny 7 andro.
Aorian'ny fandinihana mandritra ny herinandro dia tsy afaka ny ho any amin'ny masoandro ianao na hampihatra zavatra manatsara tarehy ho an'ny toerana fitsaboana. Ny fanitsakitsahana ireo fitsipika ireo dia mety hiteraka fahasamihafana eo amin'ny endriny, ny fanarenana dia hijanona elaela ary ny tsiranoka mena dia haharitra mandrakizay.
Fanampiana voalohany ho an'ny fandoroana
Ny maso dia mitroka Tropicamide
Mandeha ao amin'ny orona Snoop
Ny fanaintainana eo amin'ny sehatra ambony ambony - antony
Inona no antibiotika tokony hosotroina amin'ny angina?
Маргацовка - fampiharana
Vehivavy Summer Summer Shoes
Fanomezana voalohany ho an'ny mpampianatra amin'ny 1 Septambra
Fitsangatsanganana avy any Interlaken
Ahoana no handraisana gisa amin'ny paoma?
Pork miaraka amin'ny ovy ao anaty vilany
Vehivavy Mokazo Riker
Tsy misy atody sy leviora
Fehezina avy eo amin'ny solaitrabe amin'ny tananao
Lapan'ny Lapam-panjakana Summer of Chile
Fandefasana trano ao amin'ny efitrano fidirana amin'ny fomba maoderina
Akanjo hariva amin'ny dantelina
Gigi Hadid sy Zane Malik dia niara-nijery tamin'ny lahatsary vaovao
Lalao Winter ho an'ny ankizy
Herinandron'ny vehivavy bevohoka - inona no mitranga?